Hordhac 2 Hub ka dhigis: Video taxane ah - Olole caalami ah oo loogu talagalay Waxbarashada Nabadda
(Waxaa daabacay: Xafiiska Qaramada Midoobay ee arrimaha hub ka dhigista.)
Hub-ka-dhigistu muxey muhiim u tahay? Helitaanka hubku qasab maahan inuu sababo isku dhac, laakiin wuu dhiirrigalin karaa, xoojin karaa oo dheereyn karaa. Hub ka dhigista iyo xakameynta hubka ayaa door muhiim ah ka ciyaara ka hortagga iyo soo afjarida dhibaatooyinka iyo isku dhacyada hubeysan. Hub ka dhigistu sidoo kale waxay yareyn kartaa culeys dhaqaale oo fara badan oo soo food saara bulshooyinka. Ma ogtahay in qiimaha hal dagaalyahan qarsoodi ah uu kufilan yahay inuu dhigto 200,000 oo caruur ah sanad dugsiyeedka?
Taxanaha fiidiyowga # Intro2Disarmament wuxuu kakooban yahay 5 fiidiyow oo gaagaaban oo sharxaya sida hub ka dhigistu uga qayb qaadato adduun nabdoon, nabdoon oo waari kara si fudud loo fahmi karo.
Fiidiyeyaasha sharraxaadda waxaa laga heli karaa websaydhka waxbarashada Hub ka dhigista ee Xafiiska Arrimaha Hub ka dhigista halkan.
VIDEO 1 Waa maxay hub ka dhigis?
Taariikhda oo dhan, waddamadu waxay ku daba jireen hub ka dhigis si ay u joojiyaan tartamada hubka, u abuuraan kalsooni, dadkana looga ilaaliyo waxyeellada. Hub ka dhigistu waxay udub dhexaad u ahayd shaqada Qaramada Midoobay tan iyo aasaaskeedii, waxayna muhiim u tahay dhismaha adduun nabdoon oo nabdoon. Laakiin dhab ahaantii waa hub ka dhigis? Fiidiyowgaan wuxuu daawadayaasha u soo bandhigayaa fikradaha iyo fikradaha ka dambeeya hub ka dhigista iyo xakameynta hubka.
VIDEO 2 Hub ka dhigis qarnigii 21-aad - dulmar guud oo ku saabsan tiirarka ajendaha hub ka dhigista
Fiidiyowgaan wuxuu u soo bandhigayaa dhagaystayaasha "Sugida Aayaheena Guud", Agenda Xoghayaha Guud ee Hub ka dhigista. Agenda-ku wuxuu ku saleysan yahay afar tiir oo muhiim ah oo loogu talagalay in ujeeddooyinka hub ka dhigista la keeno qarniga 21aad. Isaga oo baaraya tiirar kasta, fiidiyowgaan wuxuu fiirinayaa sida aan ugu dhowaanno hub ka dhigista.
VIDEO 3 Sidee hub ka dhigista iyo xakameynta hubka u shaqeeyaan?
Fiidiyowgaan wuxuu fiirinayaa geeddi-socodka iyo qaababka ka dambeeya hub ka dhigista iyo xakameynta hubka casriga ah, iyo sida aan uga wada shaqeyno xaqiijinta yoolalka hub ka dhigista.
VIDEO 4 Hub ka dhigis iyo Yoolalka Horumar ee waara
Halkan waxaan ku eegeynaa doorka muhiimka ah ee hub ka dhigista iyo xakameynta hubka si loo gaaro himilooyinka horumarineed ee waara.
VIDEO 5 Sida loo hawl galo
Fiidiyowgaan waxaan ku eegeynaa sida shakhsiyaadka ay ula falgeli karaan hub ka dhigista, iyo muhiimada ay leedahay in la xoojiyo iskaashiga iyo isuduwidda heerarka oo dhan. Waxaan sidoo kale fiirineynaa baahida loo qabo in lala falgalo kooxo kala duwan si loo keeno aragtiyo, khibrad iyo fikrado cusub miiska.
Ka aamusinta qoryaha Afrika sanadka 2020 iyada oo loo marayo maalgashiga dhalinyarada iyo waxbarashada nabada
December 23, 2020 Warbixinnada Waxqabadka 0
Arigatou International Geneva waxay wadaa taxane seddex wada hadal oo khadka tooska ah ah si ay gacan uga geysato nabadeynta, adkeysiga iyo ka hortagga xagjirnimada rabshadaha leh iyada oo loo marayo waxbarashada Afrika. [sii wad akhriska…]
Warbixinta Toddobaad ee Sannadlaha ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee ku saabsan hub ka dhigista iyo waxbarashada aan faafin
August 16, 2016 Warar & Muuqaal, Siyaasadda 0
Warbixinta Toddobaad ee Sannadlaha ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee hub ka dhigista iyo waxbarashada faafin la'aanta (A / 71/124) ayaa loo gudbiyay kalfadhiga 71aad ee Golaha Guud si dib loogu eego fulinta talooyinka daraasadda Qaramada Midoobay ee hub ka dhigista iyo wixii aan ahayn -barashada nolosha. Warbixinta waxaa ku jira soo koobitaanno hirgelin ah oo ka kala socda dawlado iyo dhowr ururro bulshada rayidka ah. [sii wad akhriska…]
Claudette wuxuu leeyahay,
July 1, 2021 at 10: 24 pm
Qaarkeen ka mid ah muwaadiniinta caadiga ah ee dalalka dunida saddexaad waxay u baahan yihiin tallaabooyin wax ku ool ah oo ku saabsan sida hubka looga dhigo heer bulsho / waddan.